Ny Turkmenistan Airlines dia manohy ny sidina Abu Dhabi
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Turkmenistan Airlines dia manohy ny sidina Abu Dhabi
Ny Turkmenistan Airlines izao dia mampifandray sidina indray eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Ashgabat (ASB) sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Abu Dhabi (AUH). Ny sidina eo anelanelan'ny renivohitra UAE sy Turkménistan dia miasa isaky ny zoma sy alahady.
Saoud Al Shamsi, tompon'andraikitra ambony misahana ny varotra (ACCO) ao amin'ny Abu Dhabi Airport dia nilaza: fanoloran-tena hampiasa vahaolana mahomby amin'ny dia an'izao tontolo izao, efitrano fandraisam-bahiny miala sasatra ary fanolorana antsinjarany mahasarika. ”
“Ity serivisy fanampiny ity dia ao anatin'ny paikadinay hisarihana zotram-piaramanidina vaovao amin'ny tambajotran-tsika izay hanohana ny fitomboan'ny fizahan-tany ao amin'ny Emira any Abu Dhabi. Ireo sidina ireo dia heverina fa hahasarika mpandeha 20,000 XNUMX isan-taona eo anelanelan'ny tanàna roa, izay hanitatra ny fahafahan'ny mpandeha eo anelanelan'ny Abu Dhabi sy Ashgabat hiaina traikefa fitsangatsanganana mety sy mahafinaritra amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Abu Dhabi, ary hankafy ny tolotra Abu Dhabi as toeran-kaleha voalohany amin'ny fialam-boly sy ny asa, ”hoy i Al Shamsi nanampy.
Ny Turkmenistan Airlines dia hampiasa ilay zotra amin'ny alàlan'ny fiaramanidina Boeing 737-800, izay hampiasa orinasa enina sy fandrindrana toekarena. Amin'ny zoma, ny sidina 825 dia kasaina handao ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ashgabat (ASB) amin'ny 13:00 ora eo an-toerana, ary tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Abu Dhabi (AUH) amin'ny 15:30 ora eo an-toerana alohan'ny hiverenany amin'ny sidina 826, hiala amin'ny AUH amin'ny 17:00 ary tonga ao amin'ny ASB amin'ny 19:30. Ny alahady, ny sidina 827 dia voalahatra hivoaka amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Ashgabat (ASB) amin'ny 07:50 ora eo an-toerana, tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Abu Dhabi (AUH) amin'ny 10:20 ora eo an-toerana alohan'ny hiverenany amin'ny sidina 828, hiala amin'ny AUH amin'ny 11:50 ary tonga ao amin'ny ASB amin'ny 14:20.
Ekayev Shohrat, Representative of Turkmenistan Airlines in the UAE, dia nilaza hoe: “Faly izahay fa miara-miasa amin'ny Abu Dhabi Airport hamerina ny sidina indroa isan-kerinandro mankany amin'ny renivohitry ny Emira Arabo Mitambatra. Ireo sidina dia mitana andraikitra lehibe amin'ny paikadim-pitomboantsika ary natao hampitombo ny fifandraisana eo amin'ireo toerana roa ireo. Manantena izahay handray ireo mpitsangatsangana sy mpitsangatsangana an-tsambo ao amin'ny Turkménistan Airlines. ”
Global Market tsy misy adidy sy tsena fivarotana
Nosy Tourist Island Lombok: 10 maty, 40 naratra, loza mitatao amin'ny tsunami tavela taorian'ny horohoron-tany